အီတလီနိုင်ငံရဲ့သတင်းစာတစ်ခုမှာသူမကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ နွေးထွေစွာကြိုဆိုတဲ့ အကြောင်းဖော်ပြထားလို့ဝမ်းသာဂုဏ်ယူနေတဲ့ ချမ်းချမ်း – Nyi Ma Lay
အီတလီနိုင်ငံရဲ့သတင်းစာတစ်ခုမှာသူမကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ နွေးထွေစွာကြိုဆိုတဲ့ အကြောင်းဖော်ပြထားလို့ဝမ်းသာဂုဏ်ယူနေတဲ့ ချမ်းချမ်း
ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင် အားပေး ရတဲ့ အဆိုတော် ချမ်းချမ်း ကတော့ ကိုယ်ပိုင် အယ်ဘမ် များစွာ ထွ​က်ရှိ ထားပြီး ဂီတ နယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ချမ်းချမ်းက ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ အီတလီမှာ သွားရောက် နေထိုင် နေပြီး ချစ်စရာ သမီးငယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားပါ တယ်။ ချမ်းချမ်းဟာ ဆိုရင်သမီးငယ်လေးကို လည်း ပြုစု စောင့်ရှောက်ရင်း ပျော်ရွှင်ကြည်နူး နေရတာ ဖြစ်ပါတယ် နော်။
ဒီကနေ့ မှာ ဆိုရင်တော့ ချမ်းချမ်းက အီတလီ နိုင်ငံရဲ့ Pavoda မြို့က သတင်းစာမှာ သူမ အကြောင်းကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြထား ကြောင်း ဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ပြောပြလာ ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် နော်.။ ချမ်းချမ်းက”Padova ရဲ့ သတင်းစာ မျက်နှာလေး တခုမှာ ကိုယ့်အကြောင်းလေး တင်လာတော့ ဝမ်းသာ မိတယ် သိပ်လှတဲ့ padova ဘယ်နေရာ ရောက်ရောက် သဘာဝ အလှအပ တွေကို ချီမွမ်းဖို့ ဝန်မလေး တဲ့ ကျမရဲ့ အကျင့်လေး ပေါ့❤️❤️ဘယ်ရောက် ရောက် ကိုယ့်နိုင်ငံ အတွက် တဖက် တလမ်း ကနေ အမြဲ ကိုယ် တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားနေတယ်။
တဖက်ကလဲ သူတို့ နိုင်ငံမှာ ကိုယ်လာနေ တဲ့အတွက် သူတို့ မြို့ရဲ့ သဘာဝ အလှအပ တွေကို ချီးကျူး မိလိုက်တယ် အချိန် ခဏလေး အတွင်းမှာပဲ ဒီသတင်းစာမျက်နှာကနေ ကိုယ့်ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း တုန့်ပြန်လာတယ် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ယဉ်ကျေးမှူ အနုပညာ လက်ရာတွေနဲ့ ပြည့်နက် နေတဲ့ padova ❤️❤️”ဆိုပြီးပြောပြ လာခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်.
ထပ်ပြီးတော့ လည်း ချမ်းချမ်း သူတို့ တင်ထားတဲ့ စာလေးကို “သူတို့ တင်ထားတာ လေး ပါ သူမလို follower သန်းချီပီး ရှိတဲ့ အနုပညာရှင် အဆိုတော် တယောက်က ကျနော်တို့ရဲ့ မြို့လေးကို သိပ်လှကြောင်း ချီမွမ်းတဲ့ အတွက် အထူးပင် ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အနုပညာ လက်ရာ ထွန်းကားတဲ့ ဒီ padova မြို့လေးကို ချစ်ပေးတဲ့ Yangon မြို့က အဆိုတော် မော်ဒယ်လ် မချမ်းချမ်း ကို ကျနော်တို့ ကလဲ အမြဲ ကြိုဆို လျက်ပါ❤️❤️❤️❤️” ဆိုပြီး ဘာသာပြီး ပြောပြလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်နော်။ ချမ်းချမ်းဟာ ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် တစ်ဖက် တစ်လမ်း ကနေ ကြိုးစား ပေးနေ သလို သူမ ရောက်ရှိ နေတဲ့ နေရာ မှာလည်း ဂုဏ်ယူစရာ သတင်း တွေကို သယ်ဆောင် ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်နော်.။ ပရိတ်သတ် ကြီးလည်း ချမ်းချမ်းအတွက် ဂုဏ်ယူ နေကြမယ်လို့ ထင်ပါ တယ်နော်။
ပရိသတ္ေတြ ခ်စ္ခင္ အားေပး ရတဲ့ အဆိုေတာ္ ခ်မ္းခ်မ္း ကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ အယ္ဘမ္ မ်ားစြာ ထြ​က္ရွိ ထားၿပီး ဂီတ နယ္ပယ္မွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ခ်မ္းခ်မ္းက ခင္ပြန္းျဖစ္သူနဲ႔ အီတလီမွာ သြားေရာက္ ေနထိုင္ ေနၿပီး ခ်စ္စရာ သမီးငယ္ေလးကို ပိုင္ဆိုင္ ထားပါ တယ္။ ခ်မ္းခ်မ္းဟာ ဆိုရင္သမီးငယ္ေလးကို လည္း ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူး ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ေနာ္။
ဒီကေန႔ မွာ ဆိုရင္ေတာ့ ခ်မ္းခ်မ္းက အီတလီ နိုင္ငံရဲ့ Pavoda ၿမိဳ႕က သတင္းစာမွာ သူမ အေၾကာင္းကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထား ေၾကာင္း ဝမ္းသာ ဂုဏ္ယူစြာနဲ႔ ေျပာျပလာ ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ေနာ္.။ ခ်မ္းခ်မ္းက”Padova ရဲ့ သတင္းစာ မ်က္ႏွာေလး တခုမွာ ကိုယ့္အေၾကာင္းေလး တင္လာေတာ့ ဝမ္းသာ မိတယ္ သိပ္လွတဲ့ padova ဘယ္ေနရာ ေရာက္ေရာက္ သဘာဝ အလွအပ ေတြကို ခ်ီမြမ္းဖို႔ ဝန္မေလး တဲ့ က်မရဲ့ အက်င့္ေလး ေပါ့❤️❤️ဘယ္ေရာက္ ေရာက္ ကိုယ့္နိုင္ငံ အတြက္ တဖက္ တလမ္း ကေန အျမဲ ကိုယ္ တတ္နိုင္သေလာက္ ႀကိဳးစားေနတယ္။
တဖက္ကလဲ သူတို႔ နိုင္ငံမွာ ကိုယ္လာေန တဲ့အတြက္ သူတို႔ ၿမိဳ႕ရဲ့ သဘာဝ အလွအပ ေတြကို ခ်ီးက်ဴး မိလိုက္တယ္ အခ်ိန္ ခဏေလး အတြင္းမွာပဲ ဒီသတင္းစာမ်က္ႏွာကေန ကိုယ့္ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း တုန႔္ျပန္လာတယ္ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ယဥ္ေက်းမႉ အႏုပညာ လက္ရာေတြနဲ႔ ျပည့္နက္ ေနတဲ့ padova ❤️❤️”ဆိုၿပီးေျပာၿပ လာခဲ့ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္.
ထပ္ၿပီးေတာ့ လည္း ခ်မ္းခ်မ္း သူတို႔ တင္ထားတဲ့ စာေလးကို “သူတို႔ တင္ထားတာ ေလး ပါ သူမလို follower သန္းခ်ီပီး ရွိတဲ့ အႏုပညာရွင္ အဆိုေတာ္ တေယာက္က က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ၿမိဳ႕ေလးကို သိပ္လွေၾကာင္း ခ်ီမြမ္းတဲ့ အတြက္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အႏုပညာ လက္ရာ ထြန္းကားတဲ့ ဒီ padova ၿမိဳ႕ေလးကို ခ်စ္ေပးတဲ့ Yangon ၿမိဳ႕က အဆိုေတာ္ ေမာ္ဒယ္လ္ မခ်မ္းခ်မ္း ကို က်ေနာ္တို႔ ကလဲ အျမဲ ႀကိဳဆို လ်က္ပါ❤️❤️❤️❤️” ဆိုၿပီး ဘာသာၿပီး ေျပာျပလာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ေနာ္။ ခ်မ္းခ်မ္းဟာ ဆိုရင္ ျမန္မာနိုင္ငံ အတြက္ တစ္ဖက္ တစ္လမ္း ကေန ႀကိဳးစား ေပးေန သလို သူမ ေရာက္ရွိ ေနတဲ့ ေနရာ မွာလည္း ဂုဏ္ယူစရာ သတင္း ေတြကို သယ္ေဆာင္ ေပးေနတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ေနာ္.။ ပရိတ္သတ္ ႀကီးလည္း ခ်မ္းခ်မ္းအတြက္ ဂုဏ္ယူ ေနၾကမယ္လို႔ ထင္ပါ တယ္ေနာ္။
Previous post တစ်ချို့လူတွေဆိုလုပ်ဖို့သတ္တိမရှိလောက်တဲ့ အရာကို ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ လုပ်နိုင်ခဲ့ တဲ့ အတွက် တက်တူးဆရာမရဲ့ချီးကျူးခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ ပိုင်တံခွန်
Next post ကတုံးဆံပင်ပေါက်နဲ့အလန်းစားပိုစ့်တွေပေးပြီး အပြတ်ဂေါ်နေတဲ့ အေးချမ်းမိုးရဲ့ ပုံရိပ်များ